Falaanqayn: Maxay ka dhigan tahay iscasilaadii Madaxweynihii KGS Shariif Xasan( dhegayso) – Radio Daljir
Falaanqayn: Maxay ka dhigan tahay iscasilaadii Madaxweynihii KGS Shariif Xasan( dhegayso)
Noofember 8, 2018 7:13 b 0
iyadoo shalay galinkii dambe uu xilkii iska casilay madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ,ayaa waxaa aad loo hadal hayaa sababtii ku kaliftay in uu xilka iskaga tago ,maadaama uu si wayn uga soo horjeeday dowladda Soomaaliya, waxaana uu ahaa Gudoomiyihii Golaha Iskaashiga .
Sidookale waxa isna xilkii iska casilay Afhayeenkii Golaha Iskaashiga mamaul goboleedyada oo dhawanaa xilkaasi loo magacaabay .
Dad badan oo isgu jira siyaasiyiin iyo qoonyahano ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay iscasilaada Shariifka iyo halka uu culaysku uu kaga yimid.
Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada dalka ayaa haatan waxaa ku soo haray Madaxweyne yaasha Puntland, Jubaland , iyo Galmudug .
Wararka ay helayso idaacada Daljir ayaa sheegaya in Madaxweyne yaasha Jubaland , Galmudug iyo Puntland ay Qadka Telfoonka kuwada hadlen ,iyagoo ka arinsaday xaalada ku soo korortay Golaha Iskaashiga iyo xubnihii muhiimka ahaa ee ay waayeen.
Muuse Cali Jaamac oo kamid ah Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa radio daljir uga waramaya halka iyo Mustaqbalka uu ku dambeen doono shariifka.
MARTISOOR: Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil iyo falaanqayta marxaladda siyaasadeed ee dalku wajahayo (dhegayso)
Dowladda oo dib ugu soo celisay dalka 124 qof oo kuxirnaa Liibiya Sawiro)